Robert Pires oo si cad u sheegay xidiga uu doorbidayo qaab ciyaareedkiisa Ousmane Dembélé iyo Neymar Jr – Gool FM
Robert Pires oo si cad u sheegay xidiga uu doorbidayo qaab ciyaareedkiisa Ousmane Dembélé iyo Neymar Jr
(Barcelona) 15 Dis 2018. Halyayga xulka qaranka France iyo kooxda Arsenal Robert Pires ayaa ka hadlay ciyaaryahanka ku wanaagsan ka ciyaarista kooxda Barcelona xidigaha Ousmane Dembélé iyo Neymar Jr.
Ousmane Dembélé ayaa sameeyay qaladaad badan tan iyo markii uu Barcelona kaga soo biiray kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund bishii August 2017, waxaana qaladaadkiisa ka mid ah inuu kasoo dib dhoco tababarka kooxda.
Hadaba waxaa jira warar ku aadan in Barcelona ay xiiseeneyso in ay dib kaga soo ceshato PSG laacibkeedii hore ee Neymar Jr.
Balse halyayga xulka qaranka France iyo kooxda Arsenal Robert Pires ayaa sheegay in Barcelona ay ku fiican tahay 21 jirka Ousmane Dembélé, wuxuuna hadalkan kaga dhawaajiyay kadib wareysi uu ku bixiyay wargeyska Mundo Deportivo.
“Waxaan xili kasta ka hadalnaa Lionel Messi, balse Ousmane Dembélé weli waa ciyaaryahan da’ayar ah ee sameeya waxa aysan sameynin ciyaartoyda isaga da’adiisa ah”.
“Waxa ay tahay inuu sameeyo ayaa kaliya ah edbinta noloshiisa, balse dhinaca kale waa ciyaaryahan da’ayar ee tayo fiican leh, islamarkaana ka caawin kara Barcelona inay ku guuleysato Champions League iyo horyaalka La Liga ee dalka Spain”.
‘Waan aragnay kulamadii Tottenham iyo Espanyol sida uu u dhaliyay goolal cajiib ah, kuma badalan doono Ousmane Dembélé xidiga Neymar Jr sababa la xiriira in wali da’adiisu ay tahay 21 jir si wanaagsan ayuu ugu ciyaari kara lugta midig iyo bidix, wuxuu leeyahay xirfado iyo awood badan ee kubada cagta ah, in ka badan inta aan kusoo aragnay”.
Antonio Valencia oo qorsheenaya inuu ka dhaqaaqo Manchester United, sababa la xiriira...
“Ma nihin koox u nugul in laga badiyo kulanka Liverpool” – Rashford oo ka hadlay ciyaarta ka dhici doonta Anfield